राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन मात्र २ सांसदको हस्ताक्षर नपुगेको खुलासा, संकलन जारी
July 23, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन मात्र २ सांसदको हस्ताक्षर नपुगेको खुलासा, संकलन जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तयारी सुरु भएको छ । त्यसका लागि सांसदहरुको गणनामा ध्यान दिन थालिएको बुझिएको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सांसद संख्याले हस्ताक्षर गरी निवेदन दिए पुग्छ । सोही धाराको उपधारा […]
कुलमानलाई जनार्दनले दिनेभए यस्तो जिम्मेवारी, बधाई दिनेको ओइरो
July 23, 2021 July 23, 2021 N88LeaveaComment on कुलमानलाई जनार्दनले दिनेभए यस्तो जिम्मेवारी, बधाई दिनेको ओइरो
कुलमानलाई उज्यालोको नायक बनाउन मेन रोल खेल्ने देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दनले अब गर्दैछन् कमाल, कस्सिएर लागे यस्तो तयारीमा ! कुलमान र जनार्दन शर्मा बिच भेटघाट कहाँ लान खोज्दैछन् कुलमान लाई जनार्दन काठमाण्डौं| नेपाल विद्युत प्रा धिकरण पूर्वप्रमुख कुलमान घिसिङलाई उज्यालोका नायकका रुपमा स्थापित गर्न मेनरोल खेल्ने देउवा सरकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ईतिहास रच्नेगरी काम थालेका […]
मन्त्रीका लागि माधव नेपालले पठाए ६ जनाको नाम ! को-को बन्नेभयो मन्त्री ?(हेर्नुस् नामसहित)
July 23, 2021 N88LeaveaComment on मन्त्रीका लागि माधव नेपालले पठाए ६ जनाको नाम ! को-को बन्नेभयो मन्त्री ?(हेर्नुस् नामसहित)
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह अहिले सर्वाधिक चर्चामा छन् । नेता नेपालकै कारण पटकपटक एमाले एकता भाडिदैँ आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । तर सो निर्णय लत्याउदैँ नेता नेपाल अघि बढेका छन् । आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर […]
यस्तो छ बलिउड स्टार शाहरुख खानको ३ अर्ब २० करोड पर्ने आलिशान बंग्लो ! फाेटाे फिचर
July 23, 2021 N88LeaveaComment on यस्तो छ बलिउड स्टार शाहरुख खानको ३ अर्ब २० करोड पर्ने आलिशान बंग्लो ! फाेटाे फिचर
एजेन्सी । धेरैजसो बलिउड स्टारहरु प्रायः फराकिलो ठाउँ भएको डुप्लेक्स अपार्टमेन्टमा बस्न रुचाउँछन् । बलिउडका बादशाह भनेर चिनिने किङ खान अर्थात् शाहरुख खान कस्तो घरमा बस्छन् त ? शाहरुख खानका विभिन्न देशका शहरमा आलिशान घरहरु रहेको छ । उनले विभिन्न मुलुकमा आलिशान बंग्लो तथा अपार्टमेन्टमा लगानी गरेका छन् । भारतको मुम्बई, दिल्लीदेखि लिएर देश बाहिर […]
धादिङमा जाेनसन एण्ड जाेनसन खोप लगाएको १० मिनेटमै एक जनाको मृत्यु, लाइनमा बसेका मानिसहरु घर फर्के
July 23, 2021 N88LeaveaComment on धादिङमा जाेनसन एण्ड जाेनसन खोप लगाएको १० मिनेटमै एक जनाको मृत्यु, लाइनमा बसेका मानिसहरु घर फर्के
धादिङ । कोरोना भाइरसविरुद्धको अमेरिकन खोप जोनसन एण्ड जोनसन लगाएका एक बृद्धको रहस्यमय निधन भएको छ । मृत्यु हुनेमा धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ६का नर बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । जिल्लाको निलकण्ठ नगरपालिकाले सुनौलाबजारमा सञ्चालन गरेको खोप केन्द्रमा हिँडेरै पुगेका उनी खोप लगाएपछि आधा घण्टा खोप केन्द्रमै आराम गरेर घर फर्केका थिए। पारिवारिक स्रोतका […]
महाराजधिराजले हामीलाई आम माफी दिनुभएको छ : माधव नेपाल
July 23, 2021 N88LeaveaComment on महाराजधिराजले हामीलाई आम माफी दिनुभएको छ : माधव नेपाल
काठमाडौँ । नेकपा एमाले का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आममाफीको घोषणा गरेको विषयलाई लिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गरेका छन् । शुक्रबार पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले ओलीलाई ‘महाराजधिराज’को संज्ञा दिए । उनले भने, ‘हिजो महामहिम श्री ५ महाराजधिराबाट अभिव्यक्ति आयो माधव नेपालसहित मान्य सदस्यहरुलाई जति पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ, त्यसलाई आम […]
इतिहासमै राज्यको ढुकुटीबाट धेरै उपचार खर्च गर्ने ओली १ करोड २६ लाख अरुको कति-कति ?
July 23, 2021 N88LeaveaComment on इतिहासमै राज्यको ढुकुटीबाट धेरै उपचार खर्च गर्ने ओली १ करोड २६ लाख अरुको कति-कति ?
काठमाडौँ। सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भने जस्तै राज्य ढुकुटीको ताला चाबि आफ्नो हातमा भएको समयमा मैकामा चौका हान्ने नेताहरुको नाम लामो छ जसमध्ये राज्यको ढुकुटीको सबै भन्दा बढि दुरुप्रयोग गर्ने नाममा अग्रस्थानमा आउछन् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनले हाल सम्म एक करोड छब्बीस लाख रुँपैया स्वास्थ उपचारको नाममा लिई सकेका छन् । यसै […]
राष्ट्रपति भण्डारीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे भेटवार्ता
July 23, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपति भण्डारीसँग एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे भेटवार्ता
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच शुक्रबार विहान करिब २ घण्टा वार्ता भएको हो । यद्यपि उनीहरुबीच के विषयमा भेटवार्ता भएको भन्नेबारे खुलेको छैन । याे पनि समाचार एमाले नेता रावलले फिर्ता लिए राजीनामा, अब कुन गुटतिर लाग्छन् ? काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष […]
खाजा खर्च मै ४ करोड खाएको ओलीमाथि आरोप, एक्लैले खाए होलान तेत्रो ?
July 23, 2021 July 23, 2021 N88LeaveaComment on खाजा खर्च मै ४ करोड खाएको ओलीमाथि आरोप, एक्लैले खाए होलान तेत्रो ?
काठमाडाैं । सुशासन र पारदर्शिताको मामलामा यसरी पनि तुलना गर्ने दिन आयो कि कहाँ धरहराझैं इमानका अग्ला सुशील कोइराला अनि कहाँको साम्यवादी नेता केपी शर्मा ओली ? ०७० सालमा सुशील कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयले ५ हजार रुपैयाँमाथिको सरकारी खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत ०७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने । यो प्रक्रिया […]
ढिलो चाडो जनमतसंग्रहमा जानै पर्छ : विप्लव
July 23, 2021 N88LeaveaComment on ढिलो चाडो जनमतसंग्रहमा जानै पर्छ : विप्लव
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा पार्टीको अंग्रेजी मुखपत्र रेडफ्रन्ट विमोचन गर्दै उनले अहिले पञ्चायतकालमा भन्दा अहिले अचाक्ली विकृति देखिन थालेको बताए । राजनीतिको दलालीकरण भएको भन्दै उनले आफ्नो देशको निर्णय आफैं लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अहिले पार्टी एकता गर्न विदेशी […]